(Xog) Wakiilada Beesha Caalamka oo Farmaajo uga digay in uu wadahalka fashilmo | SMC
Home WARARKA MAANTA (Xog) Wakiilada Beesha Caalamka oo Farmaajo uga digay in uu wadahalka fashilmo
(Xog) Wakiilada Beesha Caalamka oo Farmaajo uga digay in uu wadahalka fashilmo
Waxaa maanta Madaxtooyada Soomaaliya gaaray Madaxda Maamul Goboleedyada si loosii wada wadatashiga u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Madax goboleedyada.
Wakiilada beesha caalamka aya qadka telefonka kula hadlay MW Farmaajo aya ku booriyay in uu sameeyo tanaasul si loo gaaro natiijo wax ku ool ah oo uu dalka uga bixi karo xaaladaha siyaasadeed ee cakiran.
Sida SMC loo xaqiijiyay, waxaa MW Farmaajo loo sheegay in haddii uu fashilmo shirkan uu isaga qaadan doono masuuliyadda fashilka, waxaana lagula taliyay in uu tanaasul buuxa sameeyo isla markaana uu ka fogaado damaciisa musharaxnino.
Villa Somalia oo uu ku sugan yahay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa goor dhaweyd gaaray Madaxda Galmudug, Puntland, Koofur Galbeed, Jubbaland, Hir-Shabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Wadahadalka xooggiisa maanta waxa ay madaxda uga hadlayaan qodobada muhiimka u ah Doorashada dalka sida SMC ay u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Deni iyo Madoobe ayaa diidmo kala hortagay nuuc doorasho oo ay ku heshiiyeen Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxda Galmudug, Koofur Galbeed, Hir-Shabeelle iyo Guddoomiyaha Banaadir.
Doorashada, oo ay ka doodayaan haddii wax ka badal lagu sameynayo nuucii ugu dambeeyay ee lagu heshiiyay Shirkii Dhuusamareeb (3) oo ay ka maqnaayeen Madaxda Jubbaland iyo Puntland.
Haddii nuuc lagu heshiiyo, dood ayaa ka taagan waqtiga la qabanayo, in lagu saleynayo muddo xileedka sharciga ah ee Baarlamaanka iyo Madaxtooyada iyo in wax laga badalayo si waqti dheeraad ah loogu helo hiigsigaas.
Ilo xog ogaal ah oo aan la hadlay SMC ayaa noo sheegay in marka wada-xaajoodku uu dhinac u dhaco ama heshiis lagu gaaro Shirkaas in lasoo bandhigayo, isla markaana hadal jeedin toos ah la siinayo Madaxda heer Federaal iyo Dowlad Goboleedba.
Previous articleRaisal Wasaaraha Ethiopia oo shaaciyay in ay sameeysanayaan lacag cusub
Next articleYaa gadaal ka riixaya Xeerka Dambiyada Jinsiga ee ka careysiiyay Guddoonka Golaha Shacabka?